Ambovombe sy Amboasary Atsimo: ravan’ny zandary ireo kizo fanafenan’ny dahalo omby halatra | NewsMada
Par Taratra sur 17/10/2019
Mitohy hatrany ny fampandrian-tany iarahan’ny Zandary sy ny Tafika malagasy. Kizo maromaro ao anatin’ny disitrikan’Ambovombe sy Amboasary Atsimo ny nanatanterahan’izy ireo hetsika manokana. Vokany, tratra ireo dahalo raindahiny niaraka amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika…
Nahitam-bokany! Izay ny azo ilazana ny “marche manoeuvre” nataon’ireo zandary mpianadraharaha ao amin’ny “centre spécial d’aguerrissement opérationnel” (CSAO) ao Imanombo, notarihin’ireo manamboninahitra sy ny zandary mpampiofana ao Ambovombe Androy, afakomaly. Nanatanterahan’ireo zandary ny fisafoana ny distrikan’Ambovombe sy Amboasary Atsimo ka izan’izany ny ao Antevamena, Fenoarivo, Mahazoarivo, Kizo Antsary, Ambondro, kizo Ampanasa, Sambalahy ary niverina indray tao amin’ny kizo Antevamena. Araka ny fampitam-baovao amin’ireo zandary mpanao fisafoana, tao Ambondro no nahatrarana an’i Tsaboto, dahalo raindahiny fanta-daza amin’ny asan-dahalo sy ny fampiantranoana dahalo. Tao amin’ny kizo Ampanasa kosa no nahatrarana dahalo roa lahy nitondra basim-borona iray niaraka tamin’ny bala ary omby miisa 15 avy nangalarina. Nalefa ao amin’ny toeram-pamonjana (fourrière) ao amin’ny kaominina Imanombo kosa ireo omby halatra ireo mandra-pahitana izay tena tompony.
Tratran’ny zandary tao Tsivory ry Alimony…
Saron’ny zandary, ny faran’ny herinandro teo, koa ny andian-dahalo antsoina hoe Alimony sy ireo namany efa-dahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao Morafeno, kaominina ambanivohitr’i Tsivory, ny alin’ny 10 oktobra 2019 teo. Raha ny tatitra nampitain’ny zandary taorian’ny fitarainana voarain’izy ireo avy amin’ny tompon’omby, lasan’ireo malaso ny omby miisa 491 nandritra ny fanafihana tao Morafeno. Nidina avy hatrany tany an-toerana nanao fanarahan-dia ireo zandary avy ao Tsivory sy ny Tafika avy ao amin’ny “Bataillon opérationnel avancé” faha-3 ka niroso tamin’ny fisavana ireo kizo sy ny kijana ao Belenalena sy ao Analamena izy ireo. Tratra nandritra ny fisavana ry Alimony sy ny namany niaraka amin’ireo omby halatra. Tratra koa ny basim-borona telo sy mohara fampiasan’izy ireo rehefa manao fanafihana. Nahitam-pahombiazana hatrany ny fiaraha-miasan’ny Zandarimaria sy ny Tafika malagasy amin’ny fampandrian-tany.